Ungayinqanda njani i-WhatsApp ngegama eligqithisiweyo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Huawei, Khu seleko, Whatsapp
Ukuphendula imibuzo eza kuthi I-Androidsis Nge-imeyile, amagqabantshintshi kwibhlog okanye ngeendlela zonxibelelwano ezahlukeneyo apho sineeakhawunti ezisebenzayo, namhlanje bendifuna ukwenza le nto ilula yokufundisa ejolise kubanini be-brand terminal Huawei kwaye ufuna Tshixa WhatsApp ngegama eligqithisiweyo ukukhusela iimfihlo zeso sicelo esibuthathaka esinokusibiza ngaphezulu kokungoneliseki ukuba siwela ezandleni ezingafanelekanga ukuwa.
Nangona ndibhekise kwisifundo ekujikelezeni i- I-WhatsApp ikhiya ngephasiwedi Ukukhusela imfihlo yethu ekuboneni amehlo, le ndlela okanye ingcebiso inokwenziwa kwaye iphelele iyahambelana nasiphi na isicelo Ukuba siyifakile kwisiphelo sethu se-Android yohlobo lweHuawei, nokuba ziinkqubo zenkqubo okanye usetyenziso olukhutshelweyo.
Nangona sikwiVenkile yokuDlala kuGoogle, ivenkile yesicelo se-Android sifumana uninzi lwezicelo zasimahla ezithi, ithiyori, eza kusinceda Tshixa WhatsApp ngegama eligqithisiweyo, eyona nyani inyulu neyoyikisayo kukuba, ubuncinci kwiiitheminali zohlobo lweHuawei ezinje ngeHuawei P8 okanye iHuawei P8 Lite, ezi zicelo azisebenzi nje okanye zisebenza nje imizuzwana embalwa.
Ngokomgaqo, kuthi, abasebenzisi beetheminali zeHuawei, oku kufuneka kusinike ngokufanayo ngokupheleleyo, kwaye nangona ayinguye wonke umntu oyaziyo, iiterminal zolu hlobo ludumileyo lwemvelaphi yaseTshayina Isicelo esigqibeleleyo sokulawula imiba eyahlukeneyo yesiphelo sethu sifakwe kwangaphambili njengomgangatho, obandakanya i-WhatsApp password okanye nasiphi na isicelo esisifakileyo kwisiphelo sethu se-Android.
Isicelo ekuthethwa ngaso, leyo ndikubonisa yona ngaphezulu nje kwale migca kwizikrini kunye nakwividiyo epheleleyo echazayo apha ngezantsi endikubonisa ngayo ukuba ungayisebenzisa njani, iphendula kwigama Umphathi wefowuni Kwaye, njengoko benditshilo kuwe, kuya kufuneka siyijonge kwiscreen sasekhaya seHuawei ukuze siyisebenzise, ​​jonga ngaphakathi kwecandelo Ukuvalwa kwesicelo ukwenza iphasiwedi yokungena eya kuthi kamva isetyenziselwe ukufikelela kwizicelo esizikhethayo phakathi kwabo bonke esibafake kwisixhobo.
1 Ividiyo: indlela yokuvimba i-WhatsApp ngegama lokungena
2 Uyenza kanjani into yokutshixa iminwe ku-WhatsApp
3 Ezinye iindlela zokuvimba i-WhatsApp kwi-Android ngaphandle kokufaka ii -apps
Ividiyo: indlela yokuvimba i-WhatsApp ngegama lokungena
Uyenza kanjani into yokutshixa iminwe ku-WhatsApp
Kungekudala siza kukwazi vala kwaye uvule i-WhatsApp usebenzisa iminwe yethu. Bebesebenza kulo msebenzi okwexeshana kwaye bekunjalo bona sele ukwezinye ii-betas zayo. Nangona okwangoku awukabikho umhla osemthethweni wokuphehlelelwa kwayo kwi-Android. Kodwa oku akuthethi ukuba asinakho ukusebenzisa le nkqubo. Kuba kunokwenzeka, kodwa ukusebenzisa izicelo zomntu wesithathu, ekulula kakhulu ukuzisebenzisa kule meko.
Enye yezona ndlela zibalaseleyo kule meko kukuTshixa iApp, nangona zikho iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo kwi-Android sithethe ngayo. Zonke zisinika ithuba lokuvimba izicelo kwifowuni, kubandakanya i-WhatsApp, kunye neminwe yethu. Bayasivumela ukuba sisebenzise ithuba lefowuni yeminwe ngoko. Ukongeza, ukusebenza kwesicelo kulula kakhulu.
Kuya kufuneka sikhuphele usetyenziso kwifowuni. Xa siyivula, iya kusicela ukuba sifake i-PIN apho siya kuba nokufikelela khona, ukusuka apho sinokulawula khona ezinye izicelo. Ngaphakathi kwi-app sifumana uluhlu lwezicelo esinazo kwi-Android, kubandakanya i-WhatsApp. Kufuneka nje Flip iswitshi kwaye oku kuthetha ukuba sinokuyithintela sisebenzisa isivamvo somnwe. Oku kuthetha ukuba xa sifuna ukufaka usetyenziso kuya kufuneka sisebenzise isivamvo somnwe. Ukukhuphela i-App Lock kufuneka ucofe kule khonkco:
I-Lock Lock: Iminwe yeminwe njengephasiwedi
Ngokuqinisekileyo kungekudala ukuyenza ngokwendalo kwisicelo ngokwaso. Kodwa ukusukela ku-WhatsApp akukho mihla inikiweyo ngalo mzuzu.
Ezinye iindlela zokuvimba i-WhatsApp kwi-Android ngaphandle kokufaka ii -apps
Singafuna ukwazi ukuvimba u-WhatsApp emnxebeni, ukuthintela omnye umntu ekubeni afikelele kwisicelo. Kule meko, sinokubhenela kuseto lwefowuni uqobo. Amanqaku amaninzi kwi-Android asinika umsebenzi wokuthintela ukufikelela kwizicelo, ukuze ukufikelela kwabo kuphele. Ukufikelela kubo, kuya kufuneka usebenzise iPIN, iphasiwedi okanye ezinye iindlela zokhuseleko, ezahluka kuhlobo olunye ukuya kolunye.
Njengoko besesitshilo, iintlobo ezininzi kwi-Android zibonelela ngolu khetho, ekufuneka silandele amanyathelo ambalwa. Sikuxelela ukuba wenzeni kwimeko yophawu ngalunye.
Vula useto lwefowuni
Ngenisa icandelo leZinto eziPhambili
Fumana ukhetho Vala kwaye ufihle usetyenziso kwaye ungene kulo
Khetha indlela yokubhloka oyisebenzisayo
Khetha i-WhatsApp kuluhlu lwezicelo ezikwiskrini
Ngenisa icandelo elibizwa Ukhuseleko kunye nemfihlo
Faka ukhetho olubizwa ngokuba yi-App Lock okanye i-Lock Lock
Ngenisa icandelo labucala
Fikelela kwicandelo elibizwa ngokuba kukhetho lwaBucala
Yenza kusebenze ukhetho olukhethiweyo lwee -apps
Khetha i-WhatsApp kuluhlu
Ngenisa useto lwefowuni
Yiya kwicandelo lezoKhuseleko kunye neminwe
Faka ukhetho olubizwa ngokuba yiBlock application
Fumana i-WhatsApp kuluhlu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Indlela yokutshixa WhatsApp ngegama eligqithisiweyo
Enkosi kakhulu ngolwazi, ibe luncedo olukhulu kum.
Ukuba ndilibale iphasiwedi, ndingayifumana njani kwakhona, nceda uncede
[APK] Khuphela uSony Music Walkman waso nasiphi na isiphelo seAndroid (Endala)
Imbeko 20 iza kufika kungekudala kwintengiso